Ngubani lo nguLeusus noHippolyta kwi 'Dream Night Midsummer'?
I-Theseus neHippolyta zivela kwi- Dream of Midsummer Night Dream , kodwa ngubani na? Khangela ekuhlalutheni kwethu.
ULeusus, iDuke waseAthene
I-Theseus iboniswa njengenkokeli enobulungisa kwaye ithandekayo. Uthandana noHippolyta kwaye uyavuya ukutshata naye. Nangona kunjalo, uyavuma ukunyanzelisa umthetho apho uHermia echaphazelekayo kwaye uyavumelana no-Egeus uyise ukuba uthobele iinjongo zakhe okanye abhekane nokufa.
"Wena uyihlo kufanele ube nguthixo" (Umthetho 1 Isimo 1, Umgca 47).
Oku kugcizelela imbono yokuba amadoda alawulayo kwaye enze izigqibo, nangona kunjalo, uyamnika ithuba lokuqwalasela iindlela zakhe:
Kungakhathaliseki ukuba bafe ukufa okanye baqhekeza
Kuze kubekho uluntu lwabantu.
Ngako oko, Hermia ulunge, buza imibuzo yakho;
Yazi ngobutsha bakho, hlola kakuhle igazi lakho,
Ingaba, ukuba ungavumeli ukhetho lukayihlo,
Unokunyamezela ukuthotyelwa kweendoda,
Ukuze uhlale e-clody mew'd,
Ukuze uhlale udade ongeyinyumba bonke ubomi bakho,
Ukulila iingoma ezinqabileyo kwiinyanga ezibandayo ezingenasiphumo.
Owesithathu-abasikelele abo bawaphethe igazi labo,
Ukuhamba nohambo olufana nentombi;
Kodwa uvuyo lomhlaba yi-rose distill'd,
Kunokuba kumile kwintwazana enyulu
Ukukhula, ubomi kunye nokufa ngesibusiso esisodwa.
(Umthetho 1 Isimo 1)
Ngokunika ixesha likaHermia, i-Theseus ivumela iimeko kunye nokungakwazi ukuba i- fairies ingenele ukuze uHermia ahambe kwaye angatshata noLysander.
Ekupheleni komdlalo, unxusa uEgeus ukuba aphulaphule ibali lomthandi ngaphambi kokuba enze kwaye ubonakalise isandla sakhe kulo.
ULeusus ubonisa ukuba unobulungisa kunye nesineke kwakhona kwizibilini zakhe xa u-Egeus emxwayisa kumdlalo womatshini
Hayi, inkosi yam enhle;
Akunjalo kuwe: Ndivile,
Kwaye akukho nto, akukho nto ehlabathini;
Ngaphandle kokuba ufumane imidlalo kwiinjongo zabo,
Ukutyulwa ngokugqithiseleyo kunye nokuxhamla intlungu,
(UmThetho wesi-5 Umdlalo 1, Umgca 77)
ULeus ubonisa indlela ahlazileyo ngayo kunye nobabalo xa ebamkela Ngezantsi kunye nabahlobo bakhe ukubonisa umdlalo wabo. Uyabongoza abahloniphekileyo ukuba bathathe umdlalo wento kwaye babone ukuhleka kwezinto ezimbi:
Unomusa thina, ukuba sibonge ngabanye.
Umdlalo wethu kufuneka uthathe oko baphutha ngako:
Yaye yeyiphi imbopheleleko engenakuyenza, inhlonipho ehloniphekileyo
Uyenza ngamandla, akufanelekanga.
Apho ndafika khona, oonobhala abakhulu banenjongo
Ukundibulisa ngamalungiselelo amkelekileyo;
Apho ndababona beqhaqhazela kwaye bekhangelekile,
Yenza ixesha phakathi kwezivakalisi,
Ukuphulukisa labo abakwenzayo ngokukrokra kwabo
Kwaye ekugqibeleni isicatshulwa saqhekeza,
Ungandihlawuleli. Ndithembele, nandile,
Kule thu cwaka kodwa ndithatha i-welcome;
Kwaye ngokuthozama komsebenzi wesaba
Ndandifunde ngokubanzi ukususela ekuhlaleni ulwimi
I-saucy ne-auditionous eloquence.
Uthando, ngoko ke, nolwimi oluboshelwe lula
Ubuncinane uthetha kakhulu, kumandla am.
(UmThetho wesi-5 Isimo 1, Umhlathi 89-90).
U-Theseus uyaqhubeka ukwenza amanqaku ahlekisayo kuwo wonke umdlalo kunye neengqungquthela ekungenakwenzeka kwayo ekubonakaliseni ukulungelelanisa kunye nokuzihlaziya.
I-Hippolyta, uKumkanikazi wama-Amazons
Betrothed kuLeusus, uHippolyta uthande kakhulu nomyeni wakhe ukuba abe kwaye ulindele kakhulu umtshato wabo ozayo.
"Iintsuku ezine ziya kuhamba ngokukhawuleza ebusuku, Ubusuku obune buza kuphinda luphuphe ixesha; Kwaye inyanga , ifana nesaphetha sesiliva esitsha esisezulwini, siya kubona ubusuku bemizibozo yethu "(UMthetho 1 Isimo 1, Umgca 7-11).
Yena, njengendoda yakhe, ulungile kwaye uvumela umdlalo weNtshonalanga ukuba uqhubeke phambili nangona uxwayiswe ngento engafanelekanga. Uyaqhayisa kumashishini kwaye uyanconywa ngabo, edlala kunye noLeusus malunga nomdlalo kunye nabalinganiswa bayo "Iimethinks akufanele asebenzise ixesha elide kwiPirramus . Ndiyathemba ukuba uya kufutshane ". (UmThetho wesi-5 Isimo 1, Umhlathi 311-312).
Oku kubonisa iimpawu ezilungileyo zeHippolyta njengenkokeli kwaye ibonisa ukuba ngumdlalo ofanelekileyo kuTheus.
"Yonke iHlabathi yeSiteji" I-Quote Meaning
I-Merry Wives ye-Windsor - Uhlalutyo lwesihloko
Ukuvakalisa amagama aseJamani ngesiNgesi
Ukusasazwa kweSilamsi e-Asiya, ngo-632 CE ukuza
UMlawuli oyiMandla kaMantyi waseRoma
Isingeniso kwi-Pentameter ye-Iambic
Ukuqonda Ukufunda - Ukufaka isicelo kwiJob
Ukuguqulwa kweMelika: uBrigadier General Daniel Morgan
Kutheni Ndijonga Amehlo Ami Xa Ndiza?